Zvakanaka SEO | Martech Zone
Chitatu, Kurume 26, 2014 Douglas Karr
Vhiki rapfuura ndakave nemufaro wekusangana Anthony Duignan-Cabrera, mutori venhau, zvemukati tenzi uye mushambadzi wedhijitari uyo akabatsira chigamba skyrocket mukuzivikanwa. Ndakakwenya pandakaziviswa seye SEO chipangamazano, zvakadaro. Ipo kudyidzana kwedu nemutengi uyu kuri kwekutsvaga kwekutsvaga, ini ndakazvonyongoka nekuti zvinoreva mufananidzo chaiwo wezvandingave ndichiitira mutengi. Kana iwe wakasangana kana kuteerera kuna Anthony achitaura, iye anotyisa… kutadza uye kunanga.
Anthony akabva ati aisada SEO. Mhinduro yangu… Neniwo!
Tsananguro yangu yakajairika kune vanhu ndeyekuti SEO yakarapwa sedambudziko remasvomhu. Google yaita basa rakakura mumakore achangopfuura ekudzora maitiro anotyisa - kusvika padanho randakazivisa SEO yakafa pamusoro pemakore maviri apfuura. Maindasitiri mapundits akaridza mhere (uye achiri kuita) kuti indasitiri inoshanda. Ini handibvumirani. Tichiri kubatsira vatengi vedu nehunyanzvi hweSEO, isu tinotenda izvozvo akanaka SEO harisi dambudziko remasvomhu zvachose, idambudziko revanhu. Zvakanaka SEO zvinoda kushambadzira zvemukati zvemukati. Kunoshamisa kushambadzira kwemukati kuri nezve kuziva kuti vateereri vako ndivanaani, varipi, maitiro ekuvakwezva, uye - pakupedzisira - maitiro ekuvashandura.
Kudzoka mu2011 ndakaona apo pandakaongorora saiti yangu ndega kuti ruzhinji rwekushanya kwakakosha chaizvo haruna kubva kumazwi akakurumbira zvakanyanya - uye ini kazhinji hazvina kumira zvakanaka pamashoko akakosha izvo zvaive zvichityaira kushanya uku. Iwo akakosha akakosha mazwi aive akareba-muswe uye verbose… uye zvirimo zvinotevera zvaive zvine chekuita uye zvine simba Ini pakarepo ndakapedza nguva shoma ndichigadzirisa zvinyorwa zvangu mukutsvaga uye ndakapedza nguva yakawanda ndichinyora zvirimo zvirinani kazhinji Iko kushambadzira kwakabhadhara… traffic yeblog yakawedzera katatu kubva panguva iyoyo.
Kuva nechirongwa cheSEO mazuva ano kwakafanana nekuve neyakakura email nzira. Ini ndinotenda yega agency inofanirwa kunzwisisa iyo nheyo dzekutsvaga injini yekugadzirisa sekungonzwisisa kwavangaita-in email email mechanics. Dzese dzinoda chikuva chakasimba, asi - a akanaka SEO zano rinovimba nezvazvino, kazhinji, zvine chekuita uye zvinomanikidza zvemukati. Dai iwe waive nesarudzo mbiri - invest in backlinks and keyword optimization… or investa in content development (design, research, writing, strategy)… zvemukati zvinokunda nguva dzese.
Kuwana a akanaka SEO chipangamazano zvakaoma, asi hazvigoneke. Zano rangu nderekutarisa mibvunzo yavo kana iwe uchida kuchengeta masevhisi avo. Kana ivo vakatanga nekudzidza nezve bhizinesi rako, maitiro aunoita anotungamira, chii chako mutengo patungamira, ndiani waunokwikwidza naye, kuti uri kushandura zvakadii, uye kunobva ruzhinji rwebhizinesi rako kubva… ivo vari kubvunza mibvunzo kwayo . Kana ivo, pachinzvimbo, vakuudze kuti ndeapi mazwi akakosha iwe aunofanirwa kuisa pachinzvimbo uye nekuita zvipikirwa nezvekuti vachakuendesa riinhi, ibva. Kana vakavimbisa peji 1 chinzvimbo… tiza.
Zvakanaka SEO haisi nezve chinzvimbo. Zvakanaka SEO ndezvekunyora hukuru zvemukati izvo zvinowanikwa zviri nyore, zvinokurudzirwa uye zvakagovaniswa. Kana zvemukati zvakanaka zvikarova Internet, vanhu vanoiverenga voigovana. Kana vanhu vakaverenga nekugovana ivo vanotaurawo nezvazvo. Kana vanhu vakataura nezvazvo, iwe unozogara zvakanaka.
Tags: yakanaka seoGoogle +Search Engine Optimizationngowani chenachena ngowani seo
Maitiro Ekugadzira Kukosha kubva kuDhijitari Kushambadzira
Iyo Blurry Mitsara yeKushambadzira Kudzoka paInvestment